Isinyithi esiNgcaliweyo seNsimbi kunye neZandla zokubopha | Jiannuo
Umvelisi weBunjineli zeemveliso zensimbi
I-Jiannuo Hardware Iya kufumana Ukwamkelwa kwabaThengi ngakumbi kunye noXabiso ngomgangatho olungileyo
Inkampani ephucukileyo ehlanganisa uphando nophuhliso, uyilo, ukuvelisa, ukuthengisa, ukufakela ubunjineli kunye nenkonzo yentengiso yasemva kokuthengisa, ubukhulu becala yenza ubunjineli bokugcina iintsimbi, iikholamu, izixhobo zangasese, izinto zodonga lwentambo, izixhobo zokubamba, kunye nezixhobo ezixhasayo ezinye iimveliso zeeprojekthi.
Isikhululo senqwelomoya saseChangi 4
Njengesikhululo seenqwelomoya esixakekileyo sehlabathi jikelele kule mihla, Isikhululo senqwelomoya saseChangi sesona sikhululo seenqwelomoya saseSingapore kunye nendawo ebalulekileyo yokuhamba ngenqwelomoya eAsia. Isikhululo senqwelomoya esandula kuvulwa seChangi Airport yindawo enemigangatho emibini, isakhiwo esiziimitha ezingama-25 ukuphakama sinomgangatho ophantsi wamamitha ayi-225,000 eemitha. Kulindeleke ukuba inyuse inani labantu abakhoyo lonke malunga nomyinge wama-78 ezigidi ngonyaka. Njengomvelisi okhethekileyo kwicandelo leempahla zekhompyutha, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonitshwe kukuthatha inxaxheba kule projekthi ngokusebenzisana nomthengi wethu eSwitzerland. I-JN yayinoxanduva ngokuyinxalenye yensimbi engenazintsimbi: inkqubo yentsimbi engaginyisi mathe, insimbi engenasiseko yokulwa nokungqubana, njl.
] Enye yevenkile yokuthenga yokugqibela kwiOrchard Road ngaphambi kokuba ifike kwiSithili saseCivic, iOrchard Central yeyona ndawo ithengiswayo emide yaseSwitzerland enezinto ezizodwa ezinje ngeglasi yeglasi kunye nomculi wasekhaya uMatiku Ngui. Inezinto ezininzi ezinokuqhayisa ngazo malunga nokubandakanya ngaphambili indawo yentengiso yaseMedithera, eyona ndawo indala kakhulu yangaphakathi eVia Ferrata eludongeni, olona qokelelo lukhulu kufakelo lobugcisa loluntu ngamagcisa avunyiweyo ehlabathi, iYadi yeNdawo engama-24/7 esebenzayo kunye neDiscovery Walk. Njengomvelisi okhethekileyo kwicandelo lezinto zentsimbi, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonitshwe kukuthatha inxaxheba kule projekthi ngokusebenzisana nomthengi wethu eSwitzerland. I-JN yayinoxanduva ngokuyinxalenye yenxalenye yesinyithi: Inkqubo yensimbi engenazintsimbi, njl.
UMarina One, obizwa ngokuba yi "GREEN HEART" okanye "GREEN KAKHULU", uxinizelelo olukhulu, uxinzelelo losetyenziso oluhlanganisiweyo entliziyweni yesithili sezezimali saseMarina Bay, ehambelana nombono we-Urban Redevelopment Authority's (URA) umbono wokwenza iSingapore ibe " Isixeko esiseGadini ", siye saba yindawo entsha yokwakha e-Singapore xa sele igqityiwe. Njengomvelisi okhethekileyo kwicandelo lezinto zentsimbi, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonitshwe kukuthatha inxaxheba kule projekthi ngokusebenzisana nomthengi wethu eSwitzerland. I-JN yayijongene noxanduva lwenxalenye yensimbi engenazintsimbi: Inkqubo yentsimbi engenasici, ibrakethi yentsimbi engaginyiswanga kunye nezixhobo, isinyithi sensimbi yokuphakamisa ucango, izambatho zentsimbi engaginyiswanga, umhlobiso wesinyithi wokuhombisa we-electroplate ring mesh screen, gring yensimbi engenasici, i-rack yensimbi engenasici. , Inkunkuma enobunkunkqele yentsimbi engenasidima, ibollard yensimbi engenazintsimbi, ityhefu yokubhukuda yentsimbi engenasici.
Iprojekthi yeSibhedlele saseSengkang iphumelele imbasa yePlatinam yeGunya loKwakha iGunya lokwakha laseSingapore. Le projekthi, egubungela ummandla omalunga ne-228,000 yeemitha zesikwere, liziko lenkonzo yezempilo. Inesibhedlele esiphakathi, isibhedlele sabahlali kunye neeklinikhi ezininzi zeengcali. Ukugqitywa kwayo, iya kuvumela iimfuno zonyango zabahlali bakwa-Sheng Gang ukuba zilawulwe ngokufanelekileyo. Njengomvelisi okhethekileyo kwicandelo lezinto zentsimbi, uFoshan Jiannuo Hardware Co, Ltd wayehlonitshwe kukuthatha inxaxheba kule projekthi ngokusebenzisana nomthengi wethu eSwitzerland. I-JN yayinoxanduva ngokuyinxalenye yensimbi engenazintsimbi: inkqubo yentsimbi engaginyisi mathe, insimbi engenasiseko yokuchasana nokungqubana, ipleyiti yokutshekisha yokutsibela isinyithi, njl njl.
I-Jiannuo Hardware idale iqela elinamandla lobugcisa okhokelwa ziinjineli eziphezulu, abaqulunqi kunye nabasebenzi abanobuchwephesha. Ivelise izixhobo zokwenza imveliso zangaphandle, kwaye iimveliso zayo ziveliswa ngokungqinelana nenkqubo emiselweyo yobugcisa.
Ijolise ekuboneleleni abathengi ngomgangatho ophezulu, ukusebenza, inoveli kunye nembonakalo eyahlukileyo. Imveliso. Kwangelo xesha, iKenuo Hardware isoloko iphuhlisa itekhnoloji entsha, iinkqubo ezintsha, kunye neemveliso ezintsha ezifanelekileyo kwizixhobo zokuhombisa zale mihla ukuze zihambelane nophuhliso lweentengiso.
Nika abathengi izinto ezikumgangatho ophezulu, ezisebenzayo, inoveli kunye neemveliso ezizodwa. Kwangelo xesha, iKenuo Hardware isoloko iphuhlisa itekhnoloji entsha, iinkqubo ezintsha, kunye neemveliso ezintsha ezifanelekileyo kwizixhobo zokuhombisa zale mihla ukuze zihambelane nophuhliso lweentengiso.
Isixhobo seJiannuo siya kufumana ngakumbi ukubonwa kwabathengi kunye noxabiso ngomgangatho olungileyo.
Umthengi kuqala, ukuqinisekiswa komgangatho, Yenza iimveliso ezinemveliso ekumgangatho ophezulu.
Isigqubuthelo se-Stainess sensitha, ikhava kakuhle, isiciko se-Sink
304 cover idreyini insimbi, 316 inshorensi idreyini steel stainless, aqatywe inshorensi idreyini steel stainless, isiciko random stainless idreyini sentsimbi, isiciko idreyini isikwere, isiciko idreyini moya, isiciko idreyini yesikolo, isiciko idreyini ekuhlaleni.
I-Staine yensimbi yentsimbi
I-CebConcociection CDECOFROFrictions yenziwa ngamakhonkco ensimbi enxulumene nothotho, enika abantu imvakalelo yokuba ngumlondolozi onzima, ukuthunyelwa kakhulu. Amakhethini entsimbi afanelekile ukuba ahonjiswe kumakhaya, iivenkile ezinkulu, iinqwelo moya, amagumbi kunye nezinye iindawo, ukuze isikhundla sinyuswe i-smart.
Ikholamu yentsimbi engenanto inxibe i-piep yombhobho, i-stainerd yentsimbi yentsimbi, isiciko sentsimbi engenasitayile
I-Stainial Steel Farrail Habracket Brailil Handbow Handbow Stail Stail Staill Canch Canch
Intsimbi yentsimbi engenalo; Isandla sensimbi engenalo Isinxibelelanisi seStaill Steyili
Okwangoku, iJiannuo iseke ukuthengiswa okungqongqo kunye nenethiwekhi yenkonzo yentengiso nasemva kokuseka umfanekiso olungileyo weqonga, oye wanconywa kwaye wamkelwa ngabathengi bethu.
Sikholelwa ukuba phantsi kwenkonzo yenkonzo yokuba "umthengi kuqala, umgangatho wokuqala", i-Kenuo Hardware iya kwamkelwa kwaye ithathelwe ingqalelo ngabathengi abaninzi ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye baya kuqhubeka bekhula kwaye bomelele.